Wararkii Ugu Dambeeyay Jabhaddii Kornayl Caare Iyo Halka Uu Xaalkoodu Marayo + Ergo Iskaga Dab-qaadaysa Madaxtooyada Iyo Jabhadda Iyo Halka Lakala Taagan Yahay. – somalilandtoday.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Jabhaddii Kornayl Caare Iyo Halka Uu Xaalkoodu Marayo + Ergo Iskaga Dab-qaadaysa Madaxtooyada Iyo Jabhadda Iyo Halka Lakala Taagan Yahay.
(SLT-Hargeysa)-Dagaal kooban oo duhurnimadii shalay ka dhex qarxay ciidamada Qaranka ee fadhigoodu yahay gobalka Sanaag iyo maleeshiyo ka tirsan jabhadda Kornayl Caarre ayaa sababay khasaare inta la ogyahay ah dhaawaca hal qof oo ka tirsan jabhadda iyo dhimasho aan weli la xaddidin tiradeeda.
Dagaalkan oo ka dhacay deegaanka Dhoob oo qiyaas 50 Kiiloomitir ah dhinaca bari ka xiga magaalada Ceerigaabo ayaa yimi kaddib markii ay isku dhaceen ciidamada Qaranka iyo hurin ka mid ah jabhadda oo la sheegay in ay ku hakadeen gaadhi nooca tiknikada loo yaqaanno ah oo ka banjaray.
Warar deegaanka laga helayo ayaa sheegaya in gaadhiga tiknikada ahi uu ka mid ahaa saddex gaadhi oo ay jabhaddu wadatay, kuwaas oo ka tegey dhinaca deegaanka Ceel-Afweyn kuna sii jeeday magaalada Qardho ee Puntland oo jabhadda Kornayl Caarre fadhiisin u ah.
Ma jiro war rasmi ah oo ay dawladda ama jabhadda Kornayl Caarre ka soo saartay dagaalkan, laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in uu jiro khasaare intaas ka badan oo dhimasho ciidan iyo gaadhi tikniko ah oo ciidanka qaranku lahaayeen ay ku jiraan. Iyo in maxaabiis lix askari ahaa marka hore laga qabtay jabhaddu ay dib ka baxsadeen.
Dhinaca kalana dibadbaxyo rabshado wata oo xidhiidh la leh dagaalkan ayaa ka dhacay magaalooyinka Ceel-Afweyn, Ceerigaabo iyo Burco. Kaddib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dad taageersan jabhadda Kornayl Caarre. Inta la ogyahay ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay dibad baxyada ka dhacay magaalada Ceerigaabo, waxa aanay ciidamada ammaanku ku guulaysteen in ay kala eryaan dadkii dibad baxayey. Dibad baxa ka dhacay magaalada Burco ayaa illaa gelin dambe ee shalay socday, laakiin lama sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay.